Sida loo dhimo miisaanka: istiraatiijiyadda ugu fiican ee looga takhaluso miisaanka dheeraadka ah | Ragga Stylish
Haddii aad rabto inaad ogaato sida miisaanka loo dhimo, waxaad timid meeshii saxda ahayd. Miisaanka culus wuxuu ka mid yahay dhibaatooyinka inta badan dadka ka welwela, nasiib wanaagse waxay leedahay xal. Gaaritaankeeda ma fududa, laakiin ma aha mid murugsan sida ay mararka qaarkood u muuqan karto ... kaliya waa inaad ogaataa istiraatiijiyadda la raacayo iyo, wixii ka sarreeya, inaad leedahay awood badan.
Soo ogow waxa isbeddelada ah ee ay tahay inaad ku sameyso noloshaada si aad uga takhalusto kiiladaas dheeriga ah hal mar iyo dhammaan, isbeddel saameyn ku yeelan kara is-qiimaynta (taas oo had iyo jeer xiiso u leh inaad gaarto hadafyadaada), in kasta oo faa'iidooyinka ugu muhiimsan ee ahaanshaha miisaankaaga ugu fiican laga arki karo gudaha, taas oo ah, marka la eego caafimaadka. Waxaad dareemeysaa xoog iyo fudeyd waxaana yaraanaya halista ah in cuduro badan kugu dhacaan, badankooduna aad ayey halis u yihiin.
1 Kalori gubashada: furaha
2 Samee cunto caafimaad leh oo kaladuwan
3 Samee jimicsi joogto ah
Kalori gubashada: furaha
Sirta luminta miisaanka ayaa runtii ah mid fudud: gub kalooriyo ka badan inta aad cunayso. Hadaadan buuxin shuruudahan aasaasiga ah, dadaaladaada oo dhan waxay noqonayaan kuwo aan waxba tarayn. Haddii aad ku gubto kalooriyo badan qolka jirdhiska, laakiin markaa aad dib uga hesho wax badan oo ka mid ah cuntadaada xigta, wax horumar ah ma sameyn doontid. Taasi waa sababta jimicsigu u la socdo cunno joogto ah.
In kastoo ay waliba si gooni gooni ah u shaqeyn karaan mararka qaarkood, habka ugu fiican (ugu dhaqsaha badan, ugu waxtarka badan uguna caafimaad badan) in lagu gubo kalooriyo ka badan intaad isticmaasho iyo, sidaa awgeed, inaad lumiso miisaanka illaa aad ka gaadhayso miisaankaaga ugu habboon waa inaad isku darto cuntada iyo jimicsiga. Aan aragno sida miisaanka loogu dhimo cuntada iyo jimicsiga.
Samee cunto caafimaad leh oo kaladuwan
Markaan ka hadleyno cuntada, runti waxaan ula jeednaa cunno caafimaad leh. Taasina waa cuntooyinka, gaar ahaan kuwa ballanqaadaya inay lumiyaan tiro badan oo kiilo ah waqtiga rikoodhka, laguma talinayo. Cunnooyinka qorshaynaya inay lumiyaan miisaanka waa inay bixiyaan nafaqooyinka lagama maarmaanka ah iyo, marka lagu daro, waa inay awood u yeeshaan in lagu ilaaliyo waqti ka dib. Marka cunnadu aysan buuxin shuruudahan, waxaa jira khatar weyn oo ah in lagu rafaado saameynta soo-noqoshada iyo, tan ugu muhiimsan, dhibaatooyinka caafimaad ayaa ka dhalan kara la'aanta nafaqooyinka qaarkood.
Sidaa awgeed, inaad lumiso miisaanka, iska ilaali cunnooyinka xad-dhaafka ah ee xaddidan oo taas beddelkeedna samee cunto kaloori-hooseeya, taas oo iyaduna aad muhiim u ah inay caafimaad ahaato oo kaladuwanaansho. Iyadoo sharaf leh adduunka oo dhan, ayaa Cuntada Biyaha Waa aasaas aad u fiican cuntadaada, haddii aad rabto inaad miisaankaaga dhinto ama haddii aad kaliya u baahan tahay inaad is ilaaliso.
Hadda oo aad ku guuleysatay inaad cuntadaada ka dhigto mid kala duwan, waa inaad hubisaa inay sidoo kale caafimaad leedahay oo ay ku yar tahay kalooriyada. Si tan loo gaaro, waxaad u baahan tahay inaad qeybahaaga xakameyso. Haddii aadan waqti u helin inaad tiriso kalooriyada, sida dad badani sameeyaan, ha ka welwelin, maadaama aad qaybahaaga si fudud u maamuli karto adigoo raacaya habka saxanka: u kala qaybi saxankaaga afar qaybood oo isla eg oo laba ka mid ah ka buuxi khudradda, halka labada soo hadhayna ay tahay inaad geliso karbohaydraytyo iyo borotiinno. Sidan oo kale, boqolkiiba 50 waxay u dhigmi doonaan khudaarta; iyo karbohaydraytyada iyo borotiinku waxay joogi doonaan boqolkiiba 25 midkiiba.
Cunnooyinka calorica lama mamnuuco, laakiin ugu yaraan illaa aad ka gaarto yoolkaaga culeyska, waxaa lagugula talinayaa inaad yareyso tirada inta ugu badan ee suurtogalka ah. Jalaato, pizza, hamburger ... Wax kasta oo cuntooyinka kalooriga ah ee aad ugu jeceshahay, waa caqli in la doorto mid keliya oo loo daayo inay ka ciyaarto doorka abaalmarinta toddobaadlaha ah.. Isla sidaas ayaa ku dhacda cabitaanka khamriga: yareynta tiradooda ayaa kaa caawin doonta inaad dhaqso u hesho miisaankaaga wanaagsan. Sidan oo kale, inta badan maalmaha usbuuca cuntada waa in lagu weheliyaa galaas wanaagsan oo biyo ah. Hadana hadaad u baxdo cabitaan, isku day inaadan ku badin biirka iyo cabbitaannada kale ee aalkolada leh.
Waan ognahay taas Jimicsigu maahan wax fudud oo hiwaayad ah, laakiin waa qaab nololeed iyo, wax walba ka sarreeya, caado cimrigaaga dheereyn doonta oo kaa caawin doonta inaad miisaankaaga dhinto haddii aad u baahato. Laakiin sidee miisaankaaga ugu lumisaa jimicsi? Si loo bilaabo, sidaan horay u soo tilmaannay, waxaa lagama maarmaan ah in la isku daro cunto caafimaad leh oo kaladuwan.
Gelitaanka nooca jimicsiga, isboorti kasta oo kugu kiciya oo dhidid kaa dhiga ayaa kaa caawin doona inaad gubto kalooriyada. Markaa ha ku mashquulin naftaada wax qabadyada casriga ah haddaanay kugu habboonayn, si kasta oo ay rajo u leedahay. Haddii aad jeceshahay inaad tijaabiso waxyaabo cusub, waxaad leedahay ikhtiyaarro badan, laakiin xusuusnow in jimicsiyadaha caadiga ahi ay gaareen heerkaas maxaa yeelay way shaqeeyaan.. Waxaan ka hadlaynaa isboortiga sida orodka, baaskiil wadista ama dabaasha.
Haddii aad u maleyneyso inaad ku dhegtay, tixgeli inaad dhex-dhexaadiso xoojinta sare ee fadhiga dadaalka dhexdhexaadka ah. Istaraatiijiyaddani waxay gacan ka geysaneysaa isku-ururinta dufanka in dhaqso loo baabi'iyo. Hadana hadaad caajis ka dhigato inaad had iyo jeer ku jimicsato isla isboortiga, xusuusnow inay jiraan fursado badan: fuulitaanka jaranjarooyinka, fuulitaanka iyo xitaa isboorti kooxeed haddii aad fursad u hesho, sida kubbadda cagta ama kubbadda koleyga, oo ah fikrado aad u wanaagsan in la gubo kalooriyada inta lagu raaxeysanayo. Sidoo kale, xusuusnow isku darka isboortiga kaladuwan ayaa sidoo kale kaa caawin doona inaad la shaqeysid kooxo muruq badan isla markaana jirka u yeelatid qaab isku mid ah
Wadada buuxda ee maqaalka: Ragga Stylish » Ku habboon » Sida loo dhimo miisaanka